Xiaomi Mi 9: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Eder Ferreño | | Finday, Xiaomi
Taorian'ny herinandro maromaro ny famoahana rano, ny Xiaomi Mi 9 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Ny avo lenta vaovao an'ny marika sinoa dia naseho tamina hetsika iray tao amin'ny fireneny. Alohan'ny fampisehoana iraisam-pirenena izay hotontosaina amin'ity alahady ity ao amin'ny MWC 2019. Roa herinandro lasa izay a famelabelaran-kevitra any Shina amin'ny 20 Febroary, zavatra izay nitranga ihany tamin'ny farany. Ka fantatsika ny zava-drehetra momba ity farany ity.
Inona no azontsika antenaina amin'ity Xiaomi Mi 9 ity? Misaotra ny fivoahan'ny herinandro vitsivitsy efa nanana antsipiriany maro momba an'ity telefaona ity izahay. Avy amin'ny fakantsary aoriana telo, mankany a fantsom-panafody tafiditra ao amin'ny efijery ary famaritana maro hafa. Farany, ofisialy ny avaratry ny marika sinoa.
Ity maodelin'ny marika sinoa ity dia lohalaharana indrindra. Famantarana vaovao iray fa afaka mamokatra modely mahaliana amin'ity marika avo lenta ity ny marika. Ka azo antoka fa ho lasa smartphone malaza be. Any Sina dia efa misy, miaraka amina tahiry marobe hatreto.
1 Famaritana Xiaomi Mi 9
2 Xiaomi Mi 9: avo lenta
Famaritana Xiaomi Mi 9
Ny ampahany amin'ny famaritana an'ity Xiaomi Mi 9 ity dia tafaporitsaka tato anatin'ny herinandro. Na dia efa afaka nanamarina ihany aza izy ireo tamin'ny farany. Ka efa fantatsika izay antenaina amin'ity marika farany sinoa ity. Kalitao sy fahombiazana lehibe avy aminao. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Famaritana ara-teknika Xiaomi Mi 9
modely Mi 9
efijery 6.39-inch Super AMOLED miaraka amin'ny 1080 x 2280 pixel vahaolana ary 19: 9 ratio
Tahiry anatiny 128 / 256 GB
Fakan-tsary aoriana 48 + 16 + 12 MP miaraka amina vava f / 1.8 sy f / 1.2 PDAF ary LED Flash
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-pifandraisana namboarina tao amin'ny efijery NFC infrared sy bokotra mpanampy
bateria 3.300 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lafiny X X 157.5 74.67 7.61 MG
lanja Gramin'ny 173
Ity Xiaomi Mi 9 ity dia tonga amintsika miaraka amin'ny tontonana Samsung Super AMOLED. Ka ny marika sinoa dia manolo-tena amin'ny kalitao, na dia mety hampiakatra be ny vidin'ny fitaovana aza izany. Nisafidy famirapiratana hatramin'ny 600 nits izy, ankoatra ny fananana fiarovana Corning Gorilla Glass 6 amin'ilay fitaovana. Ny marika sinoa dia nanararaotra ny teo alohan'ny telefaona be loatra, satria ny 90,7% an'io aloha no hita eo amin'ny efijery. Sarimihetsika bebe kokoa ary fanamarihana malina kokoa. Raha ny marina dia nihena be ny sisiny. Ny marika dia nilaza fa ny sisiny farany ambany dia nahena 40%.
Xiaomi Mi 9: avo lenta
Toy ny efa naneho hevitra nandritra ny volana maro, ny Xiaomi Mi 9 no finday avo lenta voalohany an'ny marika manana Snapdragon 855. Azontsika atao koa ny manantena herinaratra lehibe avy amin'ny fitaovana amin'ny resaka fandidiana. Izy io dia miaraka amina kinova RAM sy fitehirizana roa, RAM 6 sy 8 GB miankina amin'ny kinova sy 128 sy 256 GB fitehirizana. Io dia hahafahan'ny mpampiasa misafidy ny kinova tadiavin'izy ireo.
Ny ao ambadiky ny fitaovana dia zavatra iray izay miteraka fahalianana be. Satria ity maodely ity no voalohany amin'ireo marika tonga miaraka amina fakantsary triple aoriana. Amin'izay mba betsaka no antenaina amin'izany. Mifanena a 48 MP sensor, panoramic ultra 16 MP hafa ary fakan-tsary miaraka amin'ny optika telephoto ary sensor 12 MP amin'ny toerana fahatelo. Ka napetraka ho iray amin'ireo smartphone mahery vaika indrindra amin'ity sehatra ity amin'ny Android.
Ny sensor sensor dia nampidirina tao amin'ny efijery. Xiaomi dia naneho hevitra fa fanatsarana maro no vita amin'izany. Raha ny marina, talohan'ny fampisehoana dia efa nanambara ny marika fa ny sensor amin'ny dian-tànanan'ity Xiaomi Mi 9 ity no haingana indrindra eny an-tsena. Nahavita izany izy ireo tamin'ny alàlan'ny fibodoana faritra amboniny lehibe kokoa eo amin'ny efijery, izay ahafahan'ny fandidiana tsara kokoa.
3.300 mAh ny baterian'ny telefaona, ampy ampiarahana amin'ny processeur. Araka ny efa nampoizina dia tonga miaraka amina fiampangana haingana izy io. Ho fanampin'izany, mahita ihany koa izahay famahanana tsy misy tariby, sambany amin'ny smartphone amin'ity karazana marika sinoa ity. Etsy ankilany, ny Xiaomi Mi 9 dia efa tonga miaraka amin'ny Android Pie miaraka amin'ny MIUI 10 ho toy ny sosona fanaingoana.
Ny Xiaomi Mi 9 dia efa natolotra tany Shina. Ka manana ny vidiny ofisialin'ny fitaovana any Shina izahay. Azo antoka fa amin'ny Alahady ny vidiny any Eropa dia hiseho amin'ny fampisehoana azy ao amin'ny MWC 2019. Saingy, miaraka amin'ny vidiny any Shina isika dia afaka mahazo hevitra momba ny zavatra antenaina avy amin'ilay fitaovana.
Dika telo samihafa amin'ny fitaovana no miandry antsika, farafaharatsiny amin'ny tranga any Sina. Ny vidin'ny tsirairay amin'ireo kinova avo lenta ireo dia:
Ny kinova 6/64 GB dia vidin'ny 2.499 yuan (326 euro hanovana)
Ny maodely 8/128 GB dia mitentina 2.899 yuan, sahabo ho eo 379 euros Amin'ny fanovana
Ny Xiaomi Mi 9 miaraka amin'ny 8/256 GB dia mitentina 3.499 yuan (eo ho eo 457 euros Ho an'ny fanovana)
Na dia ny mahazatra indrindra aza dia izay ny vidin'ny fitaovana dia ho avo kokoa amin'ny fanombohana any Eropa. Saingy tsy fantatsika izao hoe ohatrinona no lafo vidy noho ny vidiny any Chine. Ankoatr'izay, amin'ny fampisehoana azy ao amin'ny MWC 2019 dia ho fantatsika hoe rahoviana no halefa any Eropa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Xiaomi Mi 9 dia ofisialy izao: ny farany avo lenta an'ny marika
Fahafinaretana mahafinaritra sy mampiankin-doha amin'ny Boost Buddies